Soo Iibso Universal Bluetooth V4.1 Lymoc V8S Ganacsi Bilaa Bilaash ah oo Bilaash ah Microphone - Rar Bilaash ah & Cashuur La'aan | WoopShop®
Bluetooth Universal V4.1 Lymoc V8S Ganacsiga Kulanka Horyfudhiga Ganacsiga ee Siman ee Gacanta leh Dhaqdhaqaaqa
Universal Bluetooth V4.1 Lymoc V8S Ganacsi wireless Xarig la aan ah headphone oo leh Microphone - Madoow gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Magaca Brand: Lymoc
Isku-xirka nooca: wireless
function: Wixii telefoonka gacanta, Hiankar Headphone, Hiwaayadda caadiga ah
Number Model: V8s
Versiyonyada Bluetooth: CSR Bluetooth 4.1
Bedelka fog: 10M
Time Working: 6-8Hours
Joojinta Qaraarka: Taageerada
Xakamaynta Voice / Codsi Dheeraad ah: Haa
Sanduuq xirmo: Haa, waxaa ka mid ah xirmo xirmo ah
function: Taageerida muusikada
Virus: V4.1 + EDR
Function: Bluetooth / handsfree / wireless
Range Frequency: 2.0-2.4GHz
Waqtiga sugida: 10Days
Baqshad la saaro: 80 mAh
Waqtiga shaqada: 6-8Hours
Xakamaynta Dareemaha: Ciyaar / Joogto / Wicitaan / Gaaro / Xakamaynta Voice
Nooc La Midaysan: Bluetooth Devices, PDA, PC iwm wireless, Wireless Gaariga madaxa, Dhego-yaraanta cayaaraha, Isboortiga Gaariga madaxa, Kuleejka Isboortiga, Gacanta Isgaadhsiinta Wireless, Stereo Gacanta, Gaariga Stereo
1 * Kuleylka Bluetooth
2 * Dheg-koobka
Waan jeclahay sheygan. Tayada codka waa cooooool. Waxaan aad u jecelahay in shaandhaynta lagu sameeyo badal dhab ah oo aan ahayn badhanka caadiga ah ee f # cking. Xakamaynta mugga sidoo kale waa mid aad ugu habboon in la isticmaalo. Waxaan jecelahay walxaha ay nashqadeeyayaashu u isticmaalaan maskaxdooda oo aaney ahayn @ss. Waan ku qanacsanahay, waxaan kugula talinayaa dukaankan.
top chegou bem antes do prazo boa durabilidade si fiican u diidmada
Dhibaatooyinka kudhaca jilbaha!
Si fiican u shaqeeya.
ayaa timid ka hor wakhtigii Tayada alaabtu waa dukaamo mahadnaq ah